Mitohy ny fampianarana : manala tena izay manakorontana | NewsMada
Mitohy ny fampianarana : manala tena izay manakorontana
“Mitohy toy ny isan’andro ihany ny fizotry ny fampianarana manerana ny Nosy”, araka ny fanambarana nataon’ny tomponandraikitra rehetra eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazana, notarihin’ny sekretera jeneraliny, Rabeson Rolland, omaly teny amin’ny foiben’ny minisitera, Anosy. Miantso ny fahatsiarovan-tenan’ny tomponandraikitra isan’ambaratongany napetraka handrindra ny fizotry ny fampianarana ny minisitera. Raisina ho manala tena avy hatrany amin’ny asany ny mpiasan’ny minisiteran’ny Fanabeazana manelingelina ny fampianarana, araka ny fanazavana azo. Nanamarika ny minisitera fa zo ny hanao fitakiana, saingy tsy tokony hatao takalonaina ny zaza malagasy.
Raha sanatria ho tonga amin’ny taona fotsy, matiantoka voalohany ny ray aman-dreny lany vola sy ny mpianatra niezaka nandritra ny taom-pianarana, nefa ho maty momoka fotsiny. Efa miezaka mitady vahaolana ho an’ny sekoly voakorontana noho ny fisian’ny fitokonana ny minisitera, amin’izao fotoana izao.
Misy amin’ireo lycée sy CEG eto an-dRenivohitra no efa nampiato ny fampianarana tao anatin’ny iray volana mahery kely. Ny tena olana, voakorontana ireo mbola mampianatra any an-dakilasy ary misy ny herisetra toy ny niseho tany Ambositra ka naharatrana mpianatra sy mpanabe. Mitohy kosa ny fampianarana amin’ny lycée tsy miankina 150.